Shiinaha kartoo Ragga hal boorsada boorsada saarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada hal-garabka ah > Boorsada garabka mid ka mid ah ragga
Boorsada garabka mid ka mid ah ragga
(1) Qaybta iibka: midkiiba. (2) Cabirka baakadka caadiga ah: dhererka 30cm X ballaca 20cm X dherer 15cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka. (3) Qeexitaanka faahfaahinta : 32cm X 24cm X 56cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh. (4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 6Kg.
Boorsada garabka ragga
1. Boorsada garabka ragga product introduction:
(1) Maaddada dusha sare ee boorsada garabka ragga waxay ka samaysan tahay harag lo 'waxaana lagu dhejiyay suuf dabiici ah oo bunni ah. Intaas waxaa sii dheer, boorsadan garabka ragga ah ee waagii hore Crazy Horse maqaarkeeda waxaa gacanta ku dhigay farsamayaqaanno isticmaalaya maqaar muddo tobanaan sano ah. Natiija ahaan, waxaad heli doontaa muuqaal culeys duug ah oo casri ah, oo aan laga heli karin meel kale. Suunka ayaa kuu oggolaanaya inaad qaadatid boorso ay ku jiraan qalab asli ah.
(2) Maqaarka casaanka ah ee hore ee hore ee quruxda badnaa ayaa si dabiici ah ugu cidhiidhigaya hooska mugdiga mugdiga ah si uu ugu habboonaado qayb kasta oo dharkaaga ka mid ah, ha ahaato suud ama denim casri ah. Boorsada isku-dhafan ee maqaar-cufan oo dhib badan oo guryo ah oo weligeed kaydin karta.
) Isla mar ahaantaana, jiinyeerka birta ayaa si wax ku ool ah u kordhin kara nolosha adeegga ee bacaha garbaha ragga. Hubso in furitaanka jiinyeerku uusan furmin.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) bacaha garbaha ragga
Dhererka 30cm X Ballaca 20cm X Dhererka 15cm
4. Baakadaha iyo rarka bacaha garbaha ragga
(2) Cabbirka baakadka ee caadiga ah: dherer 30cm X ballac 20cm X dherer 15cm ah, waxaannu u qaabeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 32cm X 24cm X 56cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 6Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 5Kg.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka boorsadan baseball-ka, waxaan dooran doonaa inaan hawada ku dirno.
(3) Ka dib marka muunad la iibiyo, haddii nuqulkii ugu horreeyay loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash.
Q2. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
1) Qaado oraah loogu talagalay sawirka sheyga, xigasho sida ku xusan qoraalka naqshadeynta alaabta, iyo xigasho sida ku xusan tusaalaha la bixiyay.
S4: Waa maxay wax soo saarkaaga wax soo saar badan?
(2) Boorsooyinka gacanta oo ay ku jiraan farsamo aad u dhib badan, soo saar maalinle ah oo ah 3000 gogo 'iyo wax soo saar bille ah 100,000.
Q6: Ma dooneysid naqshadeynta wax soo saarkayaga, ma sameyn kartaa waxna waad soo saari kartaa sida ku xusan sawirka qaabeynta?
<= 1000USD, 100% bixinta kahor.
> = 1000USD, 30% T / T ka hor, 70% D / P shixnad.
S8: Ma leedahay xad MOQ ah?
Q9. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
Q10aad. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soosaarka ballaaran?
1000-3000 wareegga wax soo saarka 35-40 maalmood
(2) Warbixinta tijaabada PRoduct ayaa la bixin karaa.
Calaamadaha kulul: Boorsada mid ka mid ah ragga, Shiinaha, soo saareyaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka
1 1 boorsada dhabarka ee boorsada
Boorsada boorarka cadceedda